एकता भाँड्ने काम स्वीकार्य हुँदैन : पोखरेल - Bishwaghatana
अगस्ट 9, 2020 अगस्ट 9, 2020 Bishwa Ghatana0Comments इश्वर पोखरेल
२५ साउन २०७७ काठमाडौँ : उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले पार्टीको आन्तरिक एकताको ‘रोडम्याप’ दुई अध्यक्ष बी(चको सहमति मात्र भएको बताउनुभएको छ । उहाँले एकताको महाधिवेशन सम्मको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा बहुमत र अल्पमतको विधिबाट समस्याको समाधान खोज्नु गलत र एकता विरोधी कार्य हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गोरखापत्र दैनिकसँग यो पार्टी एकता गर्दा स्वीकार गरेको सहमतिको विधिसँग मेल खाँदैन । यसो गर्नुहुँदैन भन्नुभयो । उहाँले पार्टी बैठक बस्न कार्यसूूची र प्रस्तावसमेत दुई अध्यक्षको छलफल र सहमतिबाट मात्रै तयार हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले निश्चित नेता बसेर छलफल, गुटको भेला, बैठक गर्ने अनि ‘पोजिसन’ बनाएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गर्न आउने स्थिति अनुचित भएको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले उहाँहरू (ओली–प्रचण्ड) पूर्व पार्टीको ‘लिगेसी’बाट अध्यक्ष हुनुभएको हो । त्यसैले एकताको महाधिवेशनसम्म कसैले हटाउन सक्दैन, हुँदैन । यो एकता भाँड्न खोज्ने कुरा मात्र हुन्छ । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन भन्नुभयो ।
उहाँले दुईमध्ये एकलाई हटाएर अर्को अध्यक्ष हुन्छ भन्ने कुरा सर्वथा अनुचित, एकता विरोधी र एकता भाँड्ने कुरा हो भन्नुभयो । दुई अलग ‘स्कुलिङ’ र पृष्ठभूमि बोकेका पार्टीको ६०–४० प्रतिशत सहभागिताका आधारमा गरिएको पार्टी एकता टिकाउन सहमतिसाथ नै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले एकता, सहमति र समझदारीको जग दुई अध्यक्ष बीचको सहमतिले मात्रै भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेता पोखरेलले २०७६ साल माघ १५ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारले ऐतिहासिक महìवका सातवटा कार्य गरेको उल्लेख गर्नुभएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले त्यही सरकारले छ महिनामा केही काम गरेन भन्दै विरोध गर्नुको औचित्य के छ ? यसको के उद्देश्य छ ? भन्नुभयो ।
उहाँले सरकार र पार्टी अध्यक्षविरुद्ध मिडियाबाजी गरेर सिङ्गो आन्दोलन र कार्यकर्ताको मन विचलित बनाउने कार्य गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले गुटका पत्रकार जम्मा पारेर चार नेताले ‘वार डिक्लियर’ गरेको विषयको समीक्षा हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले के हो विधि र पद्धति भनेको ? प्रधानमन्त्रीलाई बैठकबाट हटाउनुपर्छ भन्नु विधि हो ? प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले आएको अध्यक्षलाई हट्नुपर्छ भन्ने विधि, पद्धति हो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले विधि, पद्धतिका नाममा कुण्ठा पोख्ने काम नगर्न आग्रह गर्दै महाधिवेशनमा जाऔँ, विधि, विचार र नेतृत्वको टुङ्गो लगाआँैं भन्नुभयो । उहाँले विधि र प्रक्रियाबाट बनेका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हटाउने भन्ने विषय मात्रै पनि अनुचित, अनैतिक र अराजनीतिक कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले दुवै अध्यक्षबीच साउन ३ गते भएको बैठकले चैतअगाडि नै महाधिवेशनमा गएर नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने विषयमा सहमति बनेको स्पष्ट पार्नुभयो ।उहाँले पार्टीको आन्तरिक एकता टिकाउन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमद्वारा सार्वजनिक छबुँदे सहमति सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पार्टीको नीतिबाट सरकारका काम कारबाही निर्देशित हुनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसैगरी उहाँले निर्वाचनका समयमा जनता समक्ष पार्टीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले काम गर्ने हो भन्नुभयो ।
← मेस्सी चम्किदा नापोलीलाई हराउँदै बार्सिलोना क्वाटरफाइनलमा
भारतको स्पस्टिकरण : गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएकोमा कुनै शंका छैन →